laacib » Inuu ahaa Goolhaye, inuu leeyahay Urur Samafal, inuu yahay xiddiga ugu dheer Barca & 10 xaqiiqo oo ku aaddan saxiixa cusub ee Barcelona Yerry Mina
Inuu ahaa Goolhaye, inuu leeyahay Urur Samafal, inuu yahay xiddiga ugu dheer Barca & 10 xaqiiqo oo ku aaddan saxiixa cusub ee Barcelona Yerry Mina
Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa maanta ku dhawaaqday inay gacanta ku soo dhigtay difaaca xulka qaranka Colombia ee Yerry Mina, kaasoo ay ku soo iibsatay adduun dhan 11.8 milyan oo euro oo u dhiganta 10.45 milyan oo gini.
23-sano jirkaan Yerry Mina waxa ay Barcelona ka soo qaadatay naadiga Palmeiras, isagoo qalinka ugu duugay heshiis ku eg illaa sanadka 2023-ka.
Waxaan halkaan hoose idin kugu soo gubdinaynaa 10 xaqiiqo oo aad kaaga yaabin doona oo ku aaddan saxiixa cusub ee Barcelona Yerry Mina, sida inuu ahaa Goolhaye, inuu leeyahay Urur Samafal, inuu yahay xiddiga ugu dheer Barca iyo arrimo kale.
1- Wuxuu noqon doonaa xiddigii reer Colombia ee ugu horreeyay ee u ciyaara laacibkii Barcelona.
Lauro Mosquera ayaa kulan saaxiibtinimo u ciyaaray Barcelona kulan ay wajahday Sabadell 24-ka bishii June sanadkii 1964-kii, laakiin laacibkii ma uusan sii joogin.
Yurry Mina ayaana noqon doona laacibkii ugu horreeyay ee reer Colombia oo kulan Rasmi ah u ciyaara laacibkii kubadda cagta Barcelona.
2-Waxay isku jiil yihiin Denis Suárez oo ka tirsan FC Barcelona.
Difaaca reer Colombia ayey hal sano gudihiis wada dhasheen Denis Suárez. Oo khadka dhexe uga dheela Blaugrana waana sanadkii 1994-kii.
Denis Suárez ayaa dhashay 6 bishii Janaayo sanadkii 1994-kii, halka Mina uu isna dhashay 23-kii Septemberee isla sanadkaas.
3-Kulankiisii ugu horreeyay ee xulka qaranka Colombia.
Kulankiisii ugu horreeyey oo rasmi ah waxa uu Mina u saftay xulkiisa qaranka Colombia 6 bishii October sanadkii 2016-kii, isagoo goolkiisii ugu horreeyeyna dhaliyey 11 bishii October kulan ay barbaro 2-2 la galeen Uruguay.
4-Wuxuu noqday Ciyaaryahanka ugu dheer laacibkii Barcelona.
Waxa uu difaacan dhexe noqday ciyaaryahanka ugu dheer laacibkii Barcelona, dhirirkiisu waa 1.95m, waxaana uu ka sare maray xiddigaha dhaadheer ee Barca sida Piqué oo dhirirkiisu yahay (1.94m), Sergio (1.89m) iyo Andre Gomes (1.88m).
5-Wuxuu noqday laacibkii 10-aad ee reer Colombia ee iminka ku sugan horyaalka La Liga.
Yerry Mina ayaa noqday laacibka 10-aad ee waqti xaadirkan ka xamaasha ama ku sugan horyaalka La Liga kaddib Carlos Bacca (Villarreal), Juanjo Narváez (Real Betis), Luis Muriel (Seville), Daniel Torres (Alavés), Jefferson Lerma (Levante), Jeison Murillo (Valencia) and Bernardo Espinosa, Johan Mojica iyo Marlos Moreno (Girona).
6-Afar Lambar oo kala duwan ayuu xirtay waayihiisa ciyaareed.
Mina wuxuu xirtay afar Lambar oo kala duwan waayihiisa ciyaareed illaa iyo hadda waxaana ay kala yihiin:-
No.3 uu u xirtay Deportivo Pasto, No.26 Independiente Santa Fe and Palmeiras, sidoo kale No.13 iyo No.16 ayuu u xirtay xulka qaranka Colombia.
Lambarka uu u xiran doono Barcelona ee No.24 ayaa noqon doona kiisa shanaad.
7-Wuxuu leeyahay Urur Samafal ah.
Ciyaariyahanka wuxuu leeyahay hay’ad samafal oo dabayaaqadii 2016-kii ka soo bilowday Guachené – Colombia oo 30 Kiilo mitir u jirta Cali, taasoo u jeedkeedu yahay inay caawiso 2,000 oo shaqsi.
8-Wuxuu ahaa Goolhaye Daafac dhexe isku badelay.
Mina ayaa waayihiisa kubbada cagta ka bilaabay Goolhayenimo, waana dhaqan soo jireen ka ahaa reerkiisa, balse wuxuu go’aansaday inuu booska badesho, isagoo isku rogay difaac dhexe.
9-Waa guuleyste Koobab:
Difaaca reer Colombia ayaa sii wada inuu noqdo laacibkii muhiim ah waxaana looga mahdinayaa midaa koobabka uu ku guuleystay.
Wuxuu mar la noqday kooxdiisa horyaalka Colombia 2014, sidoo kale Copa Sudamericana ayuu la hantay 2015 – halka uu Palmeiras kula guuleystay Brasileirao 2016.
10-Qoys iyo Saaxiibo.
Qoyskiisa iyo Saaxiibadiisa waa qeyb muhiim ah oo ka tirsan Noloshiisa wuxuuna inta badan waqtigiisa uu ku sugan banaanka garoonka la qaataa iyaga.
Midaas waxaa jawaab kaaga filan Sawirrada uu sida joogtada ah u soo dhigo Baraha Bulshadu ku xiriirto ee Internet-ka.